Coral Nurseries | Reef Resilience
Ny fepetra takiana mahazatra amin'ny fanaparitahana ny haran-dranomasina dia ny fananganana toeram-pambolena izay ampiasaina hamokarana sy famatsiana haran-dranomasina marobe izay hambolena eny amin'ny vatohara. Ny toeram-pambolena haran-dranomasina dia singa manan-danja amin'ity dingana ity satria izy ireo dia manome toerana ahafahana manaparitaka sy mampitombo ny vatohara.
Ny toeram-pambolena haran-dranomasina dia mety amin'ny sehatra ('ao amin'ny toerana') na amin’ny tany ('ex situ'). Na dia afaka miteraka zanatany haran-dranomasina maro aza ireo karazana akanin-jaza roa ireo, dia misy ny tombony sy ny fatiantoka ho an'ny tsirairay izay miankina amin'ny loharanon-karena sy ny tanjon'ny fandaharan'asa famerenana amin'ny laoniny.
Toeram-pambolena any an-tsaha
Ny ankamaroan'ny akanin-jaza amin'izao fotoana izao dia miorina amin'ny saha, matetika any amin'ny faritra ivelan'ny haran-dranomasina voajanahary. Ny tombony amin'ireo akanin-jaza ireo dia ny vidiny mora sy ny fomba teknolojia ambany, ahafahan'ny mpiasa tsy dia mahay na manana traikefa handray anjara amin'ny fikojakojana azy ireo. Ny tsy fatiantoka dia ireo toeram-pambolena madinika ireo dia mora iharan'ny fihoaram-pefy ara-tontolo iainana toy ny hafanana mafana na tafio-drivotra mahery izay mety hanimba ny haran-dranomasina sy ny rafitra akanin-jaza.
Ny hazo mitsingevana PVC izay ampiasaina amin'ny fambolena sy fanabeazana ny haran-dranomasina staghorn. Tavernier, Florida. Sary © Coral Restoration Foundation
Misy karazana rafitra roa lehibe ampiasaina amin'ny toeram-pambolena haran-dranomasina: mitsinkafona ary raikitra rafitra.
Ohatra amin'ny rafitra mitsingevana dia ahitana:
Fitaovana haran-dranomasina mitsingevana
Toeram-pisakafoanana any Key Largo, Florida. Sary © Tim Calver
latabatra mitsingevana any Seychelles. Sary © Jason Houston
Ohatra amin'ny rafitra raikitra dia ahitana:
A-frames sy domes
Staghorn coral block akanin-jaza ao amin'ny Cane Bay, St. Croix. Sary © Kemit-Amon Lewis/TNC
Coral dome. Sary © Sombim-panantenana
Ny akanin-jaza eny an-tanety dia mihamitombo hatrany amin'ny fambolena haran-dranomasina. Ny tombony amin'ireo akanin-jaza ireo dia ny fialokalofana amin'ny fisehoan-javatra fandotoana, ny bibikely biolojika ary ny aretina. Afaka manodikodina ny toetry ny tontolo iainana ny mpitsabo mba hampiroboroboana ny fahaveloman'ny haran-dranomasina tsara indrindra sy ny fitomboana isan-taona ary afaka manara-maso sy mikojakoja tsy tapaka ny trano. Ny toeram-pambolena an-tanety dia afaka manamora ihany koa ny fomba famerenana amin'ny laoniny mifototra amin'ny olitra sy ny micro-fragmentation. Ny fatiantoka dia ny mety ho lafo vidy ireo akanin-jaza ireo, mety tsy miasa ny fitaovana, ary mitaky mpiasa voaofana efa za-draharaha amin'ny fiompiana akquarium.
Ny Nature Conservancy USVI Programs toeram-pambolena haran-dranomasina any St Croix USVI. Sary © MJS Vision
Ny karazana akanin-jaza tsirairay dia mitaky fiheverana manokana, indrindra momba ny karazana rafitra sy ny fifantenana ny toerana fitaizana zaza madinika ho an'ny akanin-jaza eny an-tsaha, ary ny kojakoja manokana, ny fitaovana ary ny fikojakojana ilaina amin'ny akanin-jaza mifototra amin'ny tany.
Zava-dehibe indrindra ny fiheverana ny fikojakojana ary ahitana:
Ny tahan'ny fikorianan'ny rano
Ny kalitaon'ny rano dia tokony ho marin-toerana ary tazonina amin'ny haavo tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina. Ny fandaharam-pitsapana ny kalitaon'ny rano tsy tapaka dia tokony hapetraka miaraka amin'ny fitaovana eny an-toerana.
Ny taham-pamokarana tsara indrindra dia miankina amin'ny karazana mitombo ao amin'ny akanin-jaza manokana ary tokony hifandimby sy hikorontana foana raha azo atao. Ny hafainganam-pandehan'ny rano ambany dia mety hitazona ny haran-dranomasina nefa mampihena ny fitomboana sy ny hakitroky ny taolana.
Ny haavon'ny hazavana dia tokony hitovy amin'ny toeram-ponenana voajanahary sy ny halaliny izay niavian'ny vatohara. Misy loharanom-pahazavana roa lehibe amin'ny rafitra mifototra amin'ny tany: hazavana voajanahary novaina (matetika azo amin'ny alàlan'ny mekanika alokaloka) sy hazavana artifisialy (matetika ao an-trano).
Iray amin'ireo asa fikojakojana mandany fotoana be indrindra amin'ny rafitra mifototra amin'ny tany ny fanaraha-maso ny fitomboan'ny haran-dranomasina amin'ny alga sy ireo zavamananaina maloto hafa. Ny fanadiovana tanana ny vato harana sy ny tanky ataon'ny mpitsabo efa voaofana no fomba mahazatra indrindra amin'ny fampihenana ny fitomboan'ny ahidrano sy ny zavamananaina maloto hafa.
Ny fiara mifono vy dia nalamina mifanaraka amin'ny toerana malalaka malalaka manodidina azy mba hanamora ny fikojakojana. Sary © Harry Lee Coral Vita
Raha mila fanazavana fanampiny dia tadiavo ireo lesona roa momba ny fanaparitahana haran-dranomasina, toeram-pambolena haran-dranomasina eny an-tsaha, ary toeram-pambolena haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDiniho ny lesona 2 sy 3
Fampahalalana momba ny famerenana amin'ny laoniny an'i Caribbean Acroporamanokatra fisie PDF
Fitaovam-pitaterana kara-tany: fitaovana azo antoka ho an'ny famokarana sy ny fambolena Acropora cervicornismanokatra fisie PDF
Famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina mavitrika: teknika ho an'ny planeta miova
Diviziona Hawaiian'ny Harena An-dranomasin'ny Famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasinamanokatra fisie PDF
Vondrona Mpiasan'ny Fampielezana Miompana amin'ny Fampodiana ny Coral Restoration Consortium
Vondrona Mpiasan'ny Fampielezana Mifototra amin'ny Tany ny Consortium Restoration Coral